Rikoooo.com - tranga: PSA CRJ tao Charlotte
Board index Terminal amin'ny Hangar Talk Real fiaramanidina
Izany ny toerana mba hiresaka momba ny tena izao tontolo izao fiaramanidina. Interesting sary, lahatsary, zava-misy ...
Lahatsoratra tsy mbola novakiana • Lahatsoratra 4 • Pejy 1 of 1
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 17 feb 2017, 19:07
A PSA Airlines Canadair CRJ-700 ho an'ny American Airlines, ny fisoratana anarana N709PS manao sidina AA-5320 avy any Charlotte, NC mankany Gulfport, MS (Etazonia) miaraka amin'ny mpandeha 44 ary mpiasan'ny 4, nandao ny lalamben'i Charlotte 36C tao amin'ny 11: 42L (16: 42: 4000: 36: 4000: 36: 10: 30: XNUMXC ) ary tao anatin'ny fiakarana voalohany izy ireo rehefa nitatitra ireo mpiasan'ny fa nandre tabataba be. Ilay fiaramanidina dia nampiato ny fiakarana amin'ny tongotra XNUMX. Nisy fisafoana nataona mpandeha nahita nahita fatin’olona maty teny an-dalana, ny fiaramanidina dia nidina ho lalana kely hanenjehina ny XNUMXR hitana ny fijerena avy eny an-tany. Notaterin'ny tranobe nahita ny toerana telo nitaingina azy rehetra, dia nisy setroka nidina avy amin'ny ilany havanana. Ny mpanamory iray iray hafa no nitatitra ny motera ankavanan-tànana niseho toa nivoatra. Ny serivisy vonjy maika no nalamina ho fidirana an-tsehatra. Niakatra tamy XNUMX ny fiaramanidina, nanoro hevitra ny mpiasan-dry zareo fa hikasa ny hamindra ny làlambe izy ireo fa kosa hijanona sy hiala raha tsy misy ny fijerena ny solika fandrehitra. Ny fiaramanidina dia nijanona ho an'ny fijanonana mijanona eo amin'ny arabe XNUMXR manodidina ny XNUMX minitra taorian'ny fijanonana ambany sy ny XNUMX minitra taorian'ny nialan'ny, nanala ny lalana tamin'ny alàlan'ny haingam-pandeha avo lenta R, mijanona aorian'ny fisintonana tsipika fohy ary nafindra. Ny serivisy vonjy maika no nanidy ny lalan-kizorana ary nitaona ilay seranam-piaramanidina nitatitra solika be teny amin'ny arabe. Nandeha haingana ilay fiaramanidina tamin'ny alàlan'ny tohatra fiantsonan'ny sambo ireo olona voatonona ary nentina nankany amin'ny toby, tsy nisy naratra. Ny fiaramanidina dia naharitra fahavoazana teo amin'ny sisin'ny elatra havan'ny tanana havanana.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 17 feb 2017, 19:28
Eny, toa fotoana izao hanombanana indray ny fefy manodidina ny seranam-piaramanidina satria tsy mitazona ny serfa tahaka ny tokony ho izy izy. Raha izaho manokana aloha dia milaza fotsiny aho fa hanangana avo kokoa izany. Tsy faly tsy nisy olona naratra na dia manantena ihany aho fa haingana ho an'ny serfa.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 17 feb 2017, 22:47
Efa tao anaty rivotra ny fiaramanidina, ka ndao atao hoe 150 + kts..Mahafantatra aho fa haingana izany. Mampalahelo ianao io biby mahafinaritra sy maditra io, tezitra sy ny sisa noho ny fiarovana amin'ny seranam-piaramanidina. Betsaka ny be vintana kokoa avy eo izay atidoha. Alao sary an-tsaina io tranga io ihany miaraka amin'ny ... ndao holazaina -737.
Ary koa, rehefa heverinao fa misy seranam-piaramanidina maro be any amin'ny faritra be tendrombohitra, izay misy lisitra iray feno biby dia mahatratra ny lalana, toa an'i Grizzly, na midina any atsimo, misy zavatra toy ny mpamononosy. Fotoana hifohazana.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 18 feb 2017, 19:15
Lahatsoratra 4 • Pejy 1 of 1
Hiverina any amin'ny "fiaramanidina tena izy"